Maxay ka mid yihiin baaritaanka caadiga ah ee indhaha?
Waqtiga dhejinta: 01-23-2021
Maxay ka mid yihiin baaritaanka caadiga ah ee indhaha? Baadhitaannada joogtada ah ee indha-indheynta waxaa ka mid ah: baaritaanka indho-falka ee sanduuqa, baaritaanka cadaadiska gudaha ee cadaadiska dhiigga, xaalad qallafsan, haddii dhiig bax ku jiro qaybta dambe ee isha, corneal confocal microscope examinatiAkhri wax dheeraad ah »
Sidee loo doortaa qalabka qalliinka ee ugu habboon qalliinka?
Waqtiga dhejinta: 01-11-2021
Sidee loo doortaa qalabka qalliinka ee ugu habboon qalliinka? Taariikhda: 2021-01-11 Markii cusbitaalku doorto aaladaha qalliinka, waa maxay waxyaabaha muhiimka ah ee ay tahay inay tixgeliyaan? Sida loo doorto kuwa ugu habboon waa inay ...Akhri wax dheeraad ah »
Farxad Dhexe Mid Dayrta iyo Maalinta Qaranka
Waqtiga boostada: 09-27-2020
Farxad Dhexe ee Dayrta Dhexe iyo Maalinta Qaranka ee Hongyu Medical waxay kuu rajeyneysaa nasiib wacan, Mid Dayrta Dhexe iyo Maalinta Qaranku waa faraxsan yihiin! Xafladdeena Dayrta Dhexe iyo Maalinta Qaranku waa soo dhow dahay waxaanan yeelan doonnaa fasax loo dabaaldego. Fadlan si naxariis leh waxaa lagugula talinayaa in ciidayada loo jadwaleeyo sidii loo ...Akhri wax dheeraad ah »
Caafimaadka Hongyu Oo Ka Qayb Galaya Bandhig Caafimaad Oo Caag Ah Oo Muhiim Ah
Waqtiga dhejinta: 06-23-2020
News About Medical Exihibiton Taariikhda: 2020-06-23 Hongyu Medical waxay kaqeybgaleysay bandhigyo caafimaad oo balaastig ah oo muhiim ah, oo lagu qabtay Magaalada JiNan, ee Gobolka Shandong. Waxay samaysay succss weyn. -Hongyu MedicalAkhri wax dheeraad ah »